EU Inoti Zvirango Zvichabviswa Kana VaMugabe Vokudza GPA
Mukuru we European Union (EU) anoona nezvemu Africa, Va Nicholas Westcott, vanoti nyika dziri mu EU dziri kuda kuti zvakabvumiranwa pasi pechibvumirano chezvematongerwo enyika che Global Politcal Agreement, zvizadziswe zvirango zvakatemerwa mutungamiriri wenyika, Va Robert Mugabe, nevamwe vavo vari mu Zanu PF, zvisati zvabviswa.
Va Westcott vataura mashoko aya pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare neChipiri mukupeta kushanya kwavo kwemazuva maviri.
Panyaya yesarudzo, Va Westcott vati EU yakazvipira kushanda naVa Mugabe kana chero ani zvake anenge akunda musarudzo dzinenge dzaitwa zviri pachena.
Zvichitevera mashoko aVa Mugabe ekuti vawongorori vesarudzo vanobva kunyika dziri mu EU havasi kuzobvumirwa kuongorora sarudzo dzinonzi naVa Mugabe dzichaitwa gore rinouya, Va Westcott vati havawoni chikonzero chekuti vawongorori ava varambidzwe kuzowongorora sarudzo idzi kana dzichiitwa zviri pachena.
Panyaya yemangoda ekwa Chiadzwa, Va Westcott vati EU inotarisira kuti zvinhu zviitwe zviri pachena uye kodzero dzevanhu dziremekedzwe.
Mukushanya kwavo, Va Westcott vakasangana naVa Mugabe, mutungamiri wehurumende, Va Morgan Tsvangirai, gurukota rezvemari, Va Tendai Biti, gurukota rezvehutano, Va Henry Madzorera, gurukota rezvemigodhi, Va Obert Mpofu, pamwe nevemasangano anoshanda akazvimiririra.
Mumusangano wavakaita naVaMugabe neMuvhuro, vaviri ava vakazeya hukama hwe Zimbabwe neEU uye kuti hukama uhwu hungasimbaradzwe sei.
Va Westcott vati masangano anoshanda akazvimirira haasi kufara nekusazadziswa kuri kuitwa chibvumirano che GPA, zvikuru nyaya dzinobata mashandiro anoita vari muchiuto.
Va Westcott vakataurawo pakupihwa kwakaitwa nyika mari inota mamiriyoni gumi nemana emadhora ne european union. Mari iyi, iyo ichaiswa muhomwe ye Unicef, ichange ichishandiswa mukutenga mishonga uye Va Westcott vanoti EU icharamba ichidyidzana ne Zimbabwe munyaya dzezvehutano.
Kubva muna 2002, European Commissiion yashandisa mari inoita madhora bhiriyoni rimwe nechidimbu mukubatsira ruzhinji rwe Zimbabwe munyaya dzezvehutano pamwe nedzidzo